Isbadalka cimilada wuxuu ku hanjabayaa inuu baabi'inayo ilaha biyaha | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimiladu wuxuu ku hanjabayaa inuu baabi’inayo ilaha biyaha
Jarmal Portillo | | Isbedelka Cimilada, Abaaraha
Sidii aan kaga soo hadalnay qormooyinkii hore, isbeddelka cimilada wuxuu kordhiyaa soo noqnoqoshada iyo xoojinta dhacdooyinka cimilada daran sida abaaraha. Abaarro dhaadheer oo daran ayaa ku hanjabaya inay xaalufin doonaan keydkeena biyaha taasna waxay na gelineysaa khatar.
Labadaba adeegsiga warshadaha, sida beeraha iyo isticmaalka bini'aadamka iyo soosaarkooda, biyuhu aad ayey muhiim u yihiin waana qiimo qaali ah. Si kastaba ha noqotee, Saamaynta isbeddelka cimilada ee wabiyada Isbaanishku way ka weynaan karaan kuwa looga fikirayo Qorshooyinka Biyoodka, sida lagu sheegay daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal ka socda jaamacadda Polytechnic University of Valencia (UPV) oo ka tirsan machadka biyaha iyo deegaanka ee injineernimada (IIAMA).
1 Sidee isbeddelka cimilada u saameeyaa ilaha biyaha?
2 Kheyraadka biyaha Isbaanishka oo qatar ku jira
Sidee isbeddelka cimilada u saameeyaa ilaha biyaha?
Markay abaaruhu yareeyaan roobka sanadlaha ah, kheyraadka biyaha ayaa yaraada isticmaalka iyo isticmaalka kadib. Intaas waxaa sii dheer, tan waa inaan ku darnaa in kororka heerkulka sanadka oo dhan uu kordhiyo xaddiga biyaha keydsan ee uumi baxa oo aan mar dambe waxtar lahayn. Dhinacyadan ayaan gebi ahaanba si fiican looga fiirsan qorshayn badan oo biyo-biyoodka Spain.
Cilmi-baarista ku saabsan saameynta isbeddelka cimilada ee qorshooyinka biyo-biyoodka waxaa soo saaray Patricia Marcos waxaana lagu daabacay joornaalka sayniska ee Ingeniería del Agua. Cilmi-baaristani waxay xoojineysaa xaddidaadda habka loo bixiyay Isbayn si ay awood ugu yeeshaan inay dhexgalaan dhammaan saameynta isbeddelka cimilada ee qorshaha biyaha.
Daraasada waxay ku soo gabagabeynayaan gabagabo muujineysa in maareynta biyaha ee Spain ay kaliya tixgelineyso yareynta wax soo saarka biyaha ee roobka isla markaana aysan tixgelinaynin kala duwanaanta xagga dhulka ee isla xadaynta biyaha. Taasi waa in la yiraahdo, Saamaynta isbeddelka cimilada ma fahmayo kala xadaynta biyaha ee dadku abuuray, laakiin si isku mid ah u saameeya kordhinta oo dhan. Qorshaha biyo-siinta ee loogu talagalay bulsho madax-bannaan ayaa laga yaabaa inay tixgeliso dhinacyada qaarkood iyo qorshe kale oo ka fikiraya kuwa kale, laakiin, si kastaba ha noqotee, isbeddelka cimilada ayaa saameyn isku mid ah ku yeelanaya.
Kheyraadka biyaha Isbaanishka oo qatar ku jira
Daraasadu waxay qiimeysay saameynta isbedelka cimilada ay ku leedahay ilaha biyaha ee nidaamka ka faa'iideysiga wabiga Júcar, iyadoo la tixgelinayo xaaladihii ugu dambeeyay ee isbedelka cimilada iyo isbarbardhigga natiijooyinka seddex moodel oo fikradeed oo biyo ah. Waxa kale oo la arkay sida khayraadka biyuhu u yaraadeen muddada dhaw iyo ta dhexe iyo sida loo sii yarayn doono. Kheyraadka biyaha ayaa la filayaa Way yaraan doonaan 12%, laakiin cilmi baaristu waxay qiyaaseysaa hoos u dhaca 20-21% muddada dhow iyo 29-36% muddada dhexe.
Hoos udhaca kuyimid kheyraadka biyaha ayaan laga fiirsan qorshayaasha abaaraha ee beelaha ismaamula. Xaqiiqdii, waxaa la ogaaday in sanadihii la soo dhaafay ay horey u jirtay hoos u dhigid la mid ah tan lagu dabaqay Qorshaha. Intaa waxaa dheer, falanqaynta ayaa go'aamisay hubin la'aan sare oo ku saabsan boqolkiiba suurtagalnimada dhimista kheyraadka, oo laga soo qaatay moodooyinka cimilada iyo, in yar, oo ah moodooyinka biyaha.
Go'aaminta boqolkiiba dhimista kheyraadka biyaha kuma saleysna kaliya saameynta isbedelka cimilada ama saadaasha cimilada, laakiin sidoo kale waxyaabaha kale, sida heerkulka, nidaamka dabaysha, kororka baahida iyo tirada dadka, baahiyaha beeraha, iyo waxyaabo kale. Taasi waa sababta cilmi-baaristu u soo jeedinayso in la fuliyo qorshe ku wajahan oo keliya go'aaminta dhimista iyo boqolleyda ilaha biyaha, laakiin in la falanqeeyo adkeysiga (awooda la qabsiga iyo culeyska culeyska) ee biyaha keydsan ay la kulmaan xaaladaha walaaca. Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in la aqoonsado meelaha ugu nugul saameynta isbeddelka cimilada iyo soo jeedinta tallaabooyin la qabsi.
Sidaad u aragto, isbeddelka cimilada wuxuu khatar ku yahay keydkeena biyaha. Biyuhu waa shey aad u qaali ah oo lama huraan ah oo ay tahay inaan ilaalino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Isbedelka cimiladu wuxuu ku hanjabayaa inuu baabi’inayo ilaha biyaha
Waa maxay roobka aashitada?